2015-08-16 ~ ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ)
Listening Skill: Border Crossings - August 18, 2015
နိုင်ငံတကာမှ ဂီတချစ်ပရိသတ်ကြီးများမှ သီချင်းတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုမှုကို VOA ကနေ Live ထုတ်လွှင့်သည့်အစီအစဉ်ပါ။ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့အတွက် ထုတ်လွှင့်မှုကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Border Crossings, Listening
Vocabulary : ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ Sathorn - ဆိပ်ခံတံတားတွင် ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွား
8:08 AM | No Comments |
ယနေ့ သြဂုတ်လ ၁၈ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ Sathorn - ဆိပ်ခံတံတားတွင် ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Bangkok Post သတင်းဌာန Learn English ကဏ္ဍတွင်တင်ထားသော သင်္ခန်းစာကို တင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
A suspected grenade was thrown at the Sathorn pier in Bangkok Tuesday but caused no injuries or damage. (ThaiPBS claims it wasapipe bomb, see here)
Police closed Sathorn Road to traffic from the pier to the Saphan Taksin BTS station.
Sathorn pier isaterminal for Chao Phraya commuter boats andashort distance from the Skytrain station. It's alsoapopular stop for Chinese tour groups.
approximately - ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ခန့်မှန်းခြေ။ ခန့်။ နီးပါး။ မျှလောက်
bounce - ပြန်၍ခုန်တက်စေသည်။ ပြန်ကန်ထွက်သည်။
commuter - ပုံမှန်ခရီးဝေးအလုပ်ဆင်းသူ။
damage - ထိခိုက်သည်။ ဒဏ်ရာရသည်
explode - ပေါက်ကွဲသည်။
blast - ပေါက်ကွဲသည်။
blow up - ပေါက်ကွဲသည်။
burst - ပေါက်ကွဲသည်။
explosives - ပေါက်ကွဲစေတတ်သောအရာဝတ္ထုများ
explosive - ပေါက်ကွဲစေတတ်သော
grenade - လက်ပစ်ဗုံး
hurl - ပစ်သည်။ (အားကိုသုံး၍ပစ်လိုက်သည်)
immediate - ချက်ချင်း။ ရုတ်တရက်။
injury - ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်။ ဒဏ်ရာ။
parking lot - ယာဉ်ရပ်နားသည့်နေရာ။
pier - ဆိပ်ခံတံတား။
popular - ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော။ လူသိများသော။
station - ဘူတာရုံ။
suspected - သံသယရှိသော။
terminal - ကားဂိတ်။ ရထားဘူတာရုံ။ လေဆိပ်။
toss - ဝေးပစ်သည်။
traffic - မီးပွိုင့်။
witness - မျက်မြင်သက်သေ။
၁၈ - ၀၈ - ၂၀၁၅
Ref: Bangkok Post: Learn English
General English, Translation News, vocabulary
Rodney Huddleston နှင့် Geoffrey K. Pullum ရေးသားပြီး ကင်ဘရေ့ခ်ျ (Cambridge) ကထုတ်တဲ့ A Student's Introduction to English Grammar အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါစာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဤစာအုပ်တွင် Clause အမျိုးအစားတွေ၊ Phrase အမျိုးအစားတွေ စသည်တို့ကို အနုစိပ်ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေသူများအတွက် အထူးအသုံးတည့်မယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Cambridge Press, Ebook Grammar, Ebooks
Vocabulary : Bom Blast in Bangkok - ထိုင်နိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
7:37 AM | No Comments |
ယနေ့ညနေက ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွင် ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲသောကြောင်း အနည်းဆုံး လူ ၁၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ ဒဏ်ရာရသူ အနည်းဆုံး ၈၀ ဦးရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှ ဖတ်ရတယ်။ ဒီသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Vocabulary အချို့ကို နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကနေ
At least 12 dead as bomb explodes close to shrine in Thai capital
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲသောကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၁၂ ဦးသေဆုံး
at least - အနည်းဆုံး
especially for visitors from East Asia -
twin explosions - ပြိုင်တူ / တပြိုင်တည်းပေါက်ကွဲမှု
a major tourist attraction - ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအဓိကလည်ပတ်သည့်နေရာတစ်ခု (ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအဓိက ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်နေရာတစ်ခု)
predominantly Asian tourists - အာရှတိုက်သား ခရီးသည်အများစု
most of those injured in the explosion - ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအများစု
shrine - နတ်ကွန်း။ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း
explode - ပေါက်ကွဲသည်
blast - ပေါက်ကွဲသည်
the scene in Bangkok - ဘန်ကောက်မြို့မှမြင်ကွင်း
afterabomb went off at the famous Erawan Shrine - ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ဧရာဝဏ်ဘုရားကျောင်းအနီးမှာ ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက်
in Thailand's capital Bangkok - ထိုင်နိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်တွင်
local media - ဒေသဆိုင်ရာသတင်းရပ်ကွက်။ ဒေသတွင်းသတင်း
Many of the injured were said to be foreign tourists - ဒဏ်ရာရသူအများစုဟာ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများဖြစ်ကြတယ်
explosion - ပေါက်ကွဲမှု
A bomb exploded in central Bangkok - ဘန်ကောက်မြို့တော်တွင် ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့သည်
killing at least 12 people - အနည်းဆုံး လူ ၁၂ ဦးသေဆုံးပြီး
wounding at least 20 - အနည်းဆုံး လူ ၂၀ ဒဏ်ရာရ
scatter - လူစုခွဲသည်၊ တစတစစီကွဲထွက်သွားသည်
went off - ပေါက်ကွဲခဲ့သည်
Body parts were scattered across the street - ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစများ လမ်းသို့ပြန့်ကြဲသွားခဲ့သည်
after the bomb went off outside the Erawan Shrine - ဧရာဝဏ်ဘုရားကျောင်းအပြင်ဖက်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက်
Bangkok Post မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကိုကနေသွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Reading Skills : Taylor Swift Releases New Single
Reading အတွက် ဒီနေ့တင်ပေးမှာကတော့ ကမ္ဘာဂီတလောကတွင် ထင်ပေါ်ကြော်ကြားနေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသူ အဆိုတော် တေလာဆွိ အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ ဒီသတင်းကို VOA Learning English ကဏ္ဍကနေ ၂၂ ရက် ၈ လပိုင်း ၂၀၁၄ နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယယ်။
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I’m Marsha James.
release (release, releasing, released, released) - ဖြန့်ချီသည်။ ထုတ်ပြန်သည်။ ထောင်စသည်မှ လွတ်မြောက်လာသည်။
single - တစ်ဦးတည်း/ တစ်ခုတည်း
the most successful - အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သော
artist - အနုပညာရှင်
one of the most successful musical artists ever - အမြဲတမ်းအအောင်မြင်ဆုံး ဂီတအနုပညာရှင်တို့ထဲမှတစ်ဦးဖြစ်သော
own - ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သော
plays guitar (play, playing, played, played) - ဂီတာတီးသည်
sing (sing, singing, sang, sung) - သီချင်းဆိုသည်
won (win, winning, won, won) - နိုင်သည်။ ဆုရသည်။
Grammy Award - ဂရိမ်းမီဆု (အမေရိကနိုင်ငံတွင် ပေးသည့် ဂီတထူးချွန်ဆုကြီး)
sold (sell, selling, sold, sold) - ရောင်းချသည်
tens of millions of albums - အယ်လ်ဘမ်ပေါင်း (၁၀) သန်း
earned (earn, earning, earned, earned) - ဝင်ငွေရရှိသည်
more than $60 million - အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၆၀) ကျော်
in 2014 alone - ၂၀၁၄ ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်းတွင်
be skilled in + V-ing - တွင် ကျွမ်းကျင်သည်
adopt (adopt, adopting, adopted, adopted) - မွေးစားသည်။ ရွေးချယ်သည်။
on her last album, "Red" - Red ဟုအမည်ရတဲ့ သူမရဲ့နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်တွင်
She began in country music - သူမဟာ Counry Music ကိုစတင်သီဆိုခဲ့တယ်။
over time - နောက်ပိုင်းမှာတော့
She moved to country-pop - country-pop ကိုပြောင်းလာခဲ့တယ်။
the 24-year-old star - အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ (ဂီတ)ကြယ်ပွင့်
announced (announce, announcing, announced, announced) - ကြော်ငြာချက်ထုတ်ပြန်သည်။ အသိပေးသည်
new album - တေးစီးရီးအသစ် (အယ်လ်ဘမ်အသစ်)
record - အသံသွင်းသည်။ မှတ်တမ်းတင်သည်
beat - ရိုက်သည်။ စည်းဝါးစည်းချက်
clean - သန့်ရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသော
very danceable - က,ခုန်မြူးထူးဖွယ်ရာကောင်းသော
ignore (ignore, ignoring, ignored, ignored) - မသိကျိုးကျွံပြုသည်။ လျစ်လျူပြုသည်။ ဥပေက္ခာပြုသည်
insult - အပြစ်ပြောသည်။ စော်ကားသည်။
cheat - လိမ်လည်လှည့်ဖျားသည်
hater - လူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုစသည်တို့ကို အထင်အမြင်အသေးသူ။ တစ်စုံတစ်ခုကို လက်မခံပဲ ငြင်းပယ်လေ့ရှိသူ။ အထင်အမြင်သေးတတ်သူ
disapprove (disapprove, disapproving, disapproved, disapproved) - လက်မခံပဲငြင်းပယ်သည်။
judgmental - ဝေဖန်တတ်သော
dismissive - အထင်အမြင်သေးသည်
perform - ပါဝင်သည်။ က,ပြဖျော်ဖြေသည်
inasport - အားကစားတစ်ခုခုတွင်
basketball player - ဘတ်စကတ်ဘော ကစားသမား
withoutaconnection to sports - အားကစားတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲ
atatime - တစ်ကြိမ်လျှင်၊ တစ်ချိန်လျှင်
just for fun - အပျော်သက်သက်
just for sex - ကာမအတွက်သက်သက်
date - ချိန်းတွေ့သည်
grace - ကျက်သရေရှိခြင်း
heavy drums - ဒရမ်အသံများများဖြင့်
electric guitar - လျှပ်စစ်ဂီတာ
including - အပါအဝင်
condition - အခြေအနေ
being free from sin - အပြစ်မှကင်းလွတ်ခြင်း
wrongdoing - အမှားလုပ်ခြင်း
pure - စင်ကြယ်သော၊ စစ်မှန်သော
perfect - ပြီးပြည့်စုံသော
saint - သူတော်ကောင်း၊ သူတော်စင်
shades - အရိပ်များ
worth - တန်ဖိုး
the end of October - အောက်တိုဘာ လကုန်တွင်
make sure - သေချာသည်
at that time - အဲဒီအခါမှာ
one of major hits - အကျော်ကြားဆုံးထဲမှ သီချင်းတစ်ပုဒ်
၁၇ - ၀၈ - ၂၀၁၅
Reading, Reading VOA News
Vocabulary: Health and fitness
ဒီနေ့ Vocabulary ကဏ္ဍအတွက်ကတော့ ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုယ်ကာယအလှဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ဆိုင်သော စကားလုံးအချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
Taking exercise - လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း
do - ပြုလုပ်သည်
warm - အပူပေးသည်။ နွေးအောင်လုပ်သည်
pull - ဆွဲသည်။
keep - သိမ်းဆည်းသည်
injure - ဒဏ်ရာရသည်
lift - မ,သည်။
keep fit - ကိုယ်ကာယလှပဖို့အတွက်လေ့ခန်းပြုလုပ်သည်။
warm up - သွေးပူလေ့ကျင့်သည်
do some stretching exercise - ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ညာယိမ်း၍ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည်။
lift weights - အလေးမ,သည်
pullamuscle - ကြွက်သားကိုလက်နှစ်ဘက်ဖြင့် နှိပ်ပေးသည်
injureajoint (your knee/ back) - (ဒူးဆစ်) အဆစ်ဒဏ်ရာရသည်
A Health lifestyle - ကျန်းမာသော ဘဝနေထိုင်မှု
lose - ပျောက်ဆုံးသည်။
give up - လက်မြှောက်သည်။ အဆုံးပေးသည်။ ရပ်တန့်သည်။
eat - စားသည်
take - ယူဆောင်သည်။ စားသည်။
get - ရရှိသည်။ ရောက်ရှိသည်။
cut down on - ကျန်းမာရေးအတွက် အစားအသောက်လျော့စားသည်
eatahealthy diet - အဟာရပြည့်ဝ၍ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုက်ညီသောအစားအစာကိုစားသည်
lose weight/ pull on weight - ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။
cut down on sugar/ fat - သကြားလျော့စားသည်။
take vitamins - ဗီတာမင်ဓာတ်ပြည့်ဝသော အစားအစာ စားသည်
give up smoking/ junk food - ဆေးလိပ်ဖြတ်သည်။ အသင့်ပြင်ပြီးသား အစားအသောက် (ပီစာ စသည်) တို့ကို ဖြတ်လိုက်သည်။
getagood night's sleep - အိပ်ရေးဝဝ အိပ်သည်။
go jogging - ပြေးသည်။ (လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် ဖြေးဖြေးပြေးသည်)
go swimming - ရေသွားကူးသည်။
go cycling - စက်ဘီးသွားစီးသည်
go skiing - နှင်းလျော့ သွားစီးသည်
go forawalk - လမ်းလျောက်ထွက်သည်
go foraswim - ရေကူးဖို့သွားသည်
go forarun - ပြေးဖို့သွားသည်
go to the gym - အားကစားရုံသို့သွားသည်။
go to an exercise class - လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့် သင်တန်းသို့သွားသည်
go toatennis club - တန်းနစ်ကလပ်သို့သွားသည်
General English, vocabulary, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
Vocabulary : Bom Blast in Bangkok - ထိုင်နိုင်ငံ ဘ...
Vocabulary : ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ Sathorn ...
Listening Skill: Border Crossings - August 18, 201...